नाथनले बढाएको एनआरएनएको शान - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
यज्ञराज जोशी नेपालगञ्ज बैशाख १०
एनआरएनका पौडी खेलाडी नाथन दोर्जे शेर्पाले सुरुवाती दुई दिनमा तीन स्वर्ण जितिसके
गत बैशाख २ गते आठौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत रूपन्देहीमा भएको लन टेनिस प्रतियोगितामा पहिलोपल्ट भाग लिएको गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)ले पहिलो स्वर्ण हात पार्यो।
पुरुष एकलमा नेपालका शीर्ष वरियताका संरक्षणभुषण बज्राचार्यले आर्मीका प्रनण खनाललाई ६–२, ६–२ को सोझो सेटमा पराजित गर्दै स्वर्ण जितेका थिए। अध्ययनका सिलसिलामा अस्ट्रेलिया पुगेपछि संरक्षकले यसपटक एनआरएनएको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता जनाएका हुन्।
९ देशका २४ खेलाडी सहभागी गराएको एनआरएनएले पहिलो स्वर्ण हात पारेको ६ दिनसम्म अर्को स्वर्णको लागि पर्खनु पर्यो तर बैशाख ८ र ९ गते भने पहिलो पटक नेपालमा प्रतियोगिता खेलेको १५ वर्षिया नाथन दोर्जे शेर्पाले राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनको शान निकै उँचो बनाइदिए।
बैशाख ८ गतेबाट शुरु भएको पौडीको पहिलो दिनमा नै दुई स्वर्ण जित्दै नाथनले सानदार सुरुवात गरे। उनले पुरुष ८ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा ९ मिनेट १७ सेकेन्डको टाइमिङ निकाल्दै एनआरएनएको नाममा पहिलो स्वर्ण जितेका हुन्। त्यसक्रममा उनले एपीएफका नसिर हुसेन (९ मिनेट ४०.९३ सेकेन्ड) र एपीएफकै उर्गेन महर्जन (१० मिनेट १९.९१ सेकेन्ड)लाई पछि पारेका थिए।
स्वर्ण पदकसँगै नाथन
यस्तै पुरुषको २ सय मिटर बटरफ्लाइमा पनि उनी अब्बल ठहरिए। यस स्पर्धामा २ मिनेट १८.१० सेकेन्डको टाइमिङका साथ स्वर्ण जित्दै एनआरएनएलाई उनले लगातार दुई स्वर्ण दिलाए। यस विधामा घरेलु टोलीका प्रभावशाली खेलाडीहरु आर्मीका अनुभव सुब्बा र पुलिसका सायेद हाम्जा शाहलाई उनले पछि पारेका थिए।
नाथनको स्वर्ण यात्रा पहिलो दिनमात्रै रोकिएन्। पहिलो दिन प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका उनले दोस्रो दिन पुरुष ४ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा एनआरएनएका लागि तेस्रो स्वर्ण जिते। उनले ४ मिनेट ३३ दशमलब ०९ सेकेण्डको समय निकाल्दै उक्त दूरी पार गरेका थिए। यसमा पनि उनले ४ मिनेट ३९ दशमलब ४७ सेकेण्डसहित एपीएफका नासिर हुसेन र ५ मिनेट ०१ दशमलब ५० सेकेण्डको टाइमिङ निकालेका एपीएफकै उर्गेन महर्जनलाई पछि पारे।
को हुन् नाथन?
१५ वर्षे नाथन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा परिवारसँगै बस्ने गर्छन्। उनको जन्म त्यही भएको हो। साढे दुई दशक अघि काठमाडौंबाट उनको परिवार अमेरिका हानिएको थियो। उनी जुम्ल्याहा दाजुभाई मध्येका एक हुन्।
सानो उमेरदेखि नै आमाले उनलाई पौडी प्रशिक्षणमा लगाएकी थिइन्। विस्तारै उनी पौडीमा रमाउँन थाले। सात वर्षको उमेर देखि पौडीमा रमाउन थालेका उनको अभ्यासस्थल न्यूयोर्क, क्विन्सस्थित टुविस्टर स्वीमिङ पुल हो। जहाँ उनी हप्तामा ६ दिन दैनिक २ घण्टाको दरले नियमित अभ्यास गर्ने गर्छन्।
यसपटक एनआरएनलाई राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने खबर सुनेपछि उनको परिवारले एनआरएनए र नेपाल पौडी संघसँग समन्वयन गरेको थियो। दुबैले ‘ओके’ भनेपछि आमाका साथमा एकहप्तामा सबै व्यवस्थापन मिलाएर उनी नेपाल आएका हुन्।
पहिलो पटक नेपालमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनले शुरुमा आफू नर्भस भएको बताए। ‘अमेरिकामा त म सधैँ सामान्य रुपमा नै प्रतियोगितामा उत्रन्थे,’ अमेरिकामा स्थानीयस्तरका प्रतियोगिता पनि खेलेका नाथनले सोमबार नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘यहाँ भने पहिलोपटक प्रतियोगितामा उत्रदा साच्चैकै नर्भस अनुभव गरिरहेको थिए। यहाँका खेलाडीहरु पनि धेरै राम्रो क्षमताका पाए।’
नयाँ ठाउँ भएकाले अझै आफूले राम्रो टाइनिङ निकाल्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘यहाँ र अमेरिकामा स्वीमिङ पुलको साइज नै फरक हुदोँ रहेछ। यहाँ आउटडोर पुल छ। यूएसमा इन्डोर पुल हुन्छ। यहाँ गर्मीपनि अत्याधिक छ। गर्मी र मौसमका कारणले पनि मेरो प्रदर्शनमा असर पुगेको छ’ उनले भने।
जारी आठौं खेलकुद प्रतियोगितालाई डिसेम्बरमा हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग) को छनौट खेलका रुपमा पनि लिइएको छ। जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरुले नै सागमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग तय छ।
के सागका लागि नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा पर्दै लामो समय नेपाल बस्नु परेमा उनले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् त?
‘पौडी संघले छनोट गरेपछि म अवश्यपनि खेल्छु,’ उनले भने, ‘उता(अमेरिका)मा स्कुलमा पनि कुरो गर्नुपर्छ। यदि स्वीमिङ संघले पनि सल्लाह गरेर आउँनुस भनेपछि म जसरी पनि उता मिलाएर कडा अभ्यास गर्दै आउँछु। गेमहरु पटक पटक सर्दा भने त्यसले व्यवस्थापन गर्न अप्ठारो हुन्छ।’
नेपाललाई दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पौडीको व्यक्तिगत स्पर्धामा पदक जिताउने गौरिका सिंह एक्ली खेलाडी हुन्। परिवारसँगै बेलायतमा बस्दै उतै अभ्यास गर्ने उनले सन् २०१६ मा भारतमा भएको १२ औं सागमा उनले एक रजत र तीन कास्य पदक जितेकी थिइन्।
के साग खेलेमा नाथनबाट नेपालले स्वर्णको अपेक्षा राख्न सक्छ त? जवाफमा उनले भने, ‘सागमा कस्ता खेलाडीहरु हुन्छन् त्यसबारे त मलाई त्यति थाहा छैन्। तर नेपालका लागि स्वर्ण जित्न भने म अवश्य प्रयास गर्नेछु।’
प्रकाशित १० बैशाख २०७६, मंगलबार | 2019-04-23 07:14:09